1। SARM हरू हुनुहुन्छ?
2। SARM हरु कसरी काम गर्दछ?
3। एसएमएम लाभहरू - मानिसहरू किन उनीहरूको प्रयोग गर्छन्?
4। SARMs को प्रकार- (हट बिक्री SARMs)
5। SARM हरू कसरी प्रयोग गर्ने?
6। के SARM सुरक्षित छन्?
7। के SARM हरु कानूनी हुनुहुन्छ?
8। कहाँ SARM हरू ऑनलाइन खरीद गर्ने?
तपाईंलाई औसत बिजुली बिल्डर, फिटनेस मोडेल वा एथलीट जस्तो देखिन्छ। तपाईंले सबै गर्न को लागी SARM प्रयोग गरिरहेको छ। यदि तपाईंले तिनीहरूको बारे सुन्नुभएको छैन वा केहि थप जानकारी चाहिन्छ भने, यस लेखले तपाईलाई यो औषधिको बारेमा सबै विवरण प्रदान गर्नेछ। तिनीहरू चयनत्मक र अरेजन रिसेप्टर मोड्युलेटर हुन् जुन उजुरीको औषधिको जस्तै प्रकारको प्रभाव देखाउँछ, तर मात्र फरक छ कि उनीहरूले उनीहरूको कार्यमा अधिक चयनशील छन्। SARMs रासायनिक रूपमा स्टेरियोडहरूसँग समान छन् र वोसो हानि र मांसपेशियोंको विकास बढाउन प्रभावकारी रूपमा पनि छन्। जसरी SARM फायदाहरु एनाबोलिक स्टेरियोड्स को समान हो, उनको चयनशील क्रियाकलाप SARMs साइड इफेक्ट कम गर्दछ। यसको मतलब तपाईं SARM प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुँदा, तपाइँ हार्मोनल असंतुलन समस्याहरू, मुँहासे, महिलाहरु र प्रोस्टेट समस्याहरु मा भाइरस को लागि अलविदा बोली कि केहि स्टेरियोड्स को प्रयोग गरेर को बारे मा ल्याई जान सक्छ।
SARM हरू द्वितीय विश्वयुद्धबाट अस्तित्वमा रहेको छ र टेस्टोस्टेरोन अणुको परिमार्जनद्वारा विकसित गरिएको थियो। 40s मा, उनि अस्टियोपोरोसिस, क्यान्सर र अन्य रोगहरु को उपचार मा प्रयोग भएको थियो जो मांसपेशी र हड्डी को अपशिष्ट हुन गयो। आज, बजारमा SARM को धेरै प्रकारका छन् एम-2866, LGD4033, YKII, RAD140, MK677, र अन्य। तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ किन तिनीहरू सबैका अल्फान्युमेरिक नामहरू छन्। कारण यो हो कि दबाइ बजार मा अझै सम्म उनको नाम नहीं दिइएको छ किनकी उनि अझै सम्म चिकित्सकीय अनुमोदित छैनन्।
SARM हरु कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे जान्न को लागी, तपाइँलाई हाम्रो शरीरमा हार्मोन कसरी काम गर्न भनेर बुझ्न आवश्यक छ। हर्मोनहरू शरीरमा दूतहरूसँग कुराकानी गर्न कोशिकाहरूसँग कुराकानी गरेर। एकपटक संचार सम्पन्न भएपछि, निर्दिष्ट आदेशहरू निष्पादित गरिन्छ।
हार्मोन्स जसले मोस्लालिटिनिटी बढाउँछ (शरीरको मोटाइको स्तर कम, ठूलो मांसपेशी, अनुहारको कपाल, र गहिरो भ्वाईस) भनिन्छ एन्ड्रोन्स। त्यहाँ टेस्टोस्टेरोन सहितको संख्या हो। यहाँका तरिकाहरू हिरोइनले शरीरमा आफ्नो कार्य कसरी गर्ने गर्छन्।
तिनीहरूले DHT (डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन) हार्मोनमा रूपान्तरण गर्छन् र पछि एरेजन रिसेप्टरहरूमा बाँडिन्छन्।
शरीरका कक्षहरू ररेजन रिसेप्टरहरूमा बाँध्नुहोस्।
तिनीहरूले estradiol (एस्ट्रोजन) हार्मोन कन्वर्ट गर्थे जो त्यसपछि एस्ट्रोजन रिसेप्टरमा बाँध्छ।
सामान्यतया, तपाईंको शरीरले असंतुलन रोक्नको लागि अन्डोन्स उत्पादनको प्रबन्ध गर्दछ। जब एक एनालिलिक स्टेरियोड लेन्छ, कक्षहरु एन्डरेन्स संग बाढी आउँछ, र सबै रिसेप्टर्स संतृप्त भयो। फलस्वरूप, एक सन्देश सबै शरीरको कक्षहरूमा पठाइन्छ जुन तिनीहरूको विकासको कारण हुन्छ। यो मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न को लागी सबै को लागि एक लाभ हुन सक्छ, तर यो एक समय मा एक उल्टा छ।
यो प्रमुख साइड इफेक्ट्स संग आउँछ, जसको केहि उल्टो हो जबकि केहि छैन। उल्टात्मक प्रभावहरूमा निचो शुक्राणु गन्तीहरू, आक्रामकता बढेको र उच्च रक्तचापमा उच्च रक्तचाप हुन्छ। यसले तेल छाला र कपालको कारण, सिस्ट्स, मुँहासे, र टेस्टिकुलर एट्रोफी पनि गर्न सक्छ। अपरिवर्तनीय व्यक्तिहरू समावेश छन्; gynecomastia, लिभर रोग, हृदय रोग, र पुरुष को पैटर्न गंजापन। स्टेरियोड्सले पनि लत बढाउँछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूका बाँकी बाकीका लागि प्रयोग गर्न सक्दछ।
यो माथिको कारणले गर्दा वैज्ञानिकहरूले स्टेरॉयड जस्तै ड्रगहरूसँग आउन निर्णय गरे जुन स्टेरियोडहरूसँग समान लाभहरू प्रदान गर्दछ तर एक स्वास्थ्य र भलाइको क्षतिको नेतृत्व गर्दैन। तपाईंको शरीरमा कसरी सिन्फिफ्रेन्स एचसीएल काम गर्दछ?
सौभाग्य देखि, SARMs स्टिरोइड्स जस्तै उत्तेजना र एरेजन रिसेप्टर द्वारा काम गर्दछ तर केवल हड्डी र मांसपेशियों को कोशिकाहरुमा गर्छ। यसको मतलब शरीरमा रहेका अन्य कक्षहरू बदलिएका छैनन्। SARM हरु किनभने यो गर्न सक्दछ;
तिनीहरू राम्रो हड्डी जस्तै हड्डी र मांसपेशिहरु लाई आकर्षित हुन्छन् र अरुको लागि मस्तिष्क, लिभर र प्रोस्टेट जस्तै छैन।
तिनीहरू अवांछित अणुहरु जस्तै एस्ट्रोजन वा DHT मा कन्वर्ट गर्दैन जुन अवांछित साइड इफेक्ट हुन सक्छ।
नियमित स्टेरियोड्सहरूको विपरीत, SARMs प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोनको उत्पादनलाई सङ्गमाउन्ट गर्दैनन् जुन SARMs चक्र पछि पुनःप्राप्त गर्न सजिलो बनाइएको छ।
माथिल्लो SARM हरूका लाभहरू मध्ये एक उल्लेख गरिएको छ कि यसले तपाईंको शरीरलाई स्टेरियोड्सका सबै फाइदाहरूको आनन्द उठाउन अनुमति दिन्छ तपाईंको शरीरको स्वास्थ्यको बलिदान बिना। यहाँ SARM हरू शरीर सौष्ठवको पवित्र कण हो किन कारणहरू छन्;
तिनीहरू आफ्नो कार्यमा धेरै छनौट हुन्छन् त्यसैले तपाईंको अन्य ऊतकहरू हानिकारक हुने गर्दछन्।तपाईं सम्भवतः तपाईंको शरीरको ऊतकहरू हान्न चाहानुहुन्छ किनकि तपाइँ अरूलाई आकारमा वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ। यही कारणले गर्दा धेरै व्यक्ति जो आफ्नो प्रदर्शन बढाउन चाहानुहुन्छ SARM हरू प्रयोग गर्न मनपर्छ किनभने तिनीहरू केवल ऊतकहरु लाई बदल्नेछ जसले हड्डिहरु र मांसपेशिहरु को आकार मा वृद्धि गर्दछ।
SARM हरू तपाईंको एस्ट्रोजेन डायभाइड्रोस्टोस्स्टेरोन कन्वर्ट गर्न सक्दैन। एस्ट्र्रोजन रूपान्तरणले शरीरमा प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू जस्तै पफनी निपल्स र उत्पादनमा उत्पादकताको हानिकारक हुन सक्छ, र अन्य प्रदर्शन वृद्धिकर्ताहरूको बिरोधमा, SARM हरूको कारण होइन।
यसले तपाईंको लिबडोमा कमी ल्याउन सक्दैन।SARM ले तपाईको लिबियो कम गर्दैन; तिनीहरूले यसलाई बढाउँछन्, र तिनीहरू, तपाईंको यौन जीवनलाई बढावा दिन सक्नेछन्।
केहि SARM हरु विभिन्न प्रोस्टेट समस्याहरू हटाउन सक्दछ।तिनीहरू कुनै पनि प्रोस्टेट समस्याहरूसँग आउँदैनन् र यदि तपाईंसँग भए पनि तिनीहरूसँग टाढा रहनेछन्। यसद्वारा, तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि तपाईंको प्रोस्टेट समस्या कुनै पनि मांसपेशिहरु हराएर अतीत को चीज हुनेछ।
जबकि बजार मा धेरै स्टेरॉयड हड्डी को बर्बाद या हानि बढन सक्छ, SARMs नहीं हुनेछ। विशेष गरी काटने चरणको समयमा SARM हतियार मांसपेशियों को बर्बाद।
तिनीहरूले तपाईंको मांसपेशीको विकास बढाए। हरेक बिल्डरबिल्डर तिनीहरूको शरीरमा मांसपेशिहरु को विकास र विकास मा रूचि राख्छ र SARM हरु उद्धार गर्नेछ। एसआरएमहरूले एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूलाई चयन गर्न बाध्यकारी रूपमा काम गर्दछ जसले यस प्रकारको ग्लूकोज र नाइट्रोजनको मात्रा बढाउँछ। फलस्वरूप, हड्डियों र मांसपेशिहरु मा एनाबोलिक प्रभावमा वृद्धि भएको छ।
तथापि, तपाईंले प्राप्त गर्नुहुने मांसपेशी रकम केही कारकहरूमा निर्भर गर्दछ जसमा तपाइँ SARM हरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। एकपटक तपाईंले SARM प्रयोग गर्नुभए पछि, तपाईले मांसपेशी जनको 20lbs लाई प्याक गर्ने सम्भव छ।
सहनशीलता बढाउनुहोस्। पर्याप्त स्टामिना गर्न सक्षम हुनुको लागी बिना लामो र टाँस्ने प्रशिक्षण सत्रहरु संग लाग्न सक्छ जुन हरेक एथलीट र बिल्डर बिल्डरको लागि हुन्छ। तपाईं SARMs प्रयोग गर्ने निर्णय भएपछि एक राम्रो समाचार हो, उनीहरूले थप विस्तारित अवधिको लागि काम गर्न मद्दत गर्नेछन् र यसैले तपाईंको मांसपेशियों को अधिक विकास को लागी अनुमति दिन्छ। यो किनकि SARMs मांसपेशियों फाइबर बढाएर आफ्नो ओक्सीजन uptake मा वृद्धि को द्वारा काम गर्दछ यसैले अधिक विस्तारित अवधि को लागि कठिन धक्का गर्न को लागि अधिक ऊर्जा प्राप्त।
शरीरको बोसो घटाउनुहोस्यदि तपाईंले शरीरको मोटो गुमाउनु भयो भने, त्यसपछि SARM हरू तपाईंलाई विभिन्न तरिकामा जलाउन सहयोग गर्नेछ। यी उत्पादनले शरीर उत्पादन गर्ने लक्ष्यको साथ मोटो कक्षहरू तोड्न शरीरलाई उत्तेजित गर्दछ। यसैले, शरीर, काम गर्दछ जस्तै यो भुखमरी मोडमा छ र यसको माध्यम ले, शरीर को वसा मा एक कठोर कमी छ।
हड्डी घनत्व बढाउनुहोस्एक हड्डी घनत्वको कमीले टूटेको हड्डिहरु र भंगहरु सहित पीडा सहित धेरै समस्याहरू आउँछ। SARMs periosteal हड्डी गठन बढ्दै यसको यो कारणले हड्डी खनिज घनत्व सुधार। SARM हरु काम गर्ने अर्को तरिका ट्रबसेलर र अन्त्योकोर्टक्ल हड्डी कारोबार घटाउँदै, डेंसेर हड्डिहरु निर्माण गर्दै।
तिनीहरूले तपाईंको जिगरलाई हानिकारक नभएसम्म तिनीहरू गैर-विषाक्त छैनन्। SARM हरू तपाईंको स्वास्थ्यमा थपिनेछ, अन्य स्टेरियोडहरूको तुलनामा तपाईंको जिगरलाई हानिकारक हुन सक्छ।
संयुक्त उपचार क्षमताहरू।संयुक्त दुखाइ बुढो वा चोटले ल्याईन्छ, र यो एक सामान्य समस्या हो जुन विशेष गरी तीव्र शारीरिक गतिविधिमा संलग्न छन्। तथ्य यो हो कि यसको लागि कुनै स्थायी समाधान हो भने हृदयघाती छ, तर SARM को प्रयोगको साथ, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाई राम्रो हुन सक्नुहुनेछ र तपाईंको सामान्य जीवन छिटो पुनः सुरु गर्नुहोस्।
सुधारिएको बल-तपाईँले मांसपेशी बल बढाउनु भएको छ जुन तपाईंलाई नयाँ जस्तै महसुस गराउनेछ।
द्रुत चोट पुन: प्राप्ति- SARM ले तपाईको पुन: रिकभरी समय कटौती गर्न सक्छ जुन तपाईले आफ्नो प्रशिक्षण सत्रहरू आरामपूर्वक जारी राख्नुहुन्छ।
तपाईंको कपालको लागि सुरक्षित। SARMs संग तपाईं बाल्यकाल वा गन्धबाट पीडित हुनेछैन र तपाईले आश्वासन दिनुभएको छ कि तपाईले आफ्नो मांसपेशी आफ्नो कपालको साथमा पाउनुहुनेछ।
तिनीहरूको हाइपोथोममस-पिट्युरी-टेस्टेस-अक्षमा उनीहरूको गम्भीर प्रभाव छैन।
तिनीहरू क्रोध वा आक्रामकता जस्तै androgenic साइड इफेक्टहरू गर्दैनन्।
मौखिक उपयोग। अधिक इंजेक्शन र लगातार दृश्यहरु को कारण दुखाइ नहीं। अझ राम्रो, मौखिक खुराक भनेको हो कि तपाईं इंजेक्शन क्षेत्रमा संक्रमित जोखिम को जोखिम मा हुनुहुन्न।
यो undetectable छ -केही SARM औषधि परीक्षणको समयमा अनावश्यक हुन्छ।
1. MXXUMUM (2866-841205-47)
यो छ उत्तम SARM त्यो अध्ययन गरिएको छ। यो ओस्टारिनको रूपमा पनि चिनिन्छ। अध्ययनले देखाउँछ कि एमके-एक्सएनएमएक्स मांसपेशी र फाईदामा जोडिएको धेरै प्रभावकारी छ जसले यसको साथ आउँछ जुन यसमा धेरै साइड इफेक्ट छैन। बिल्डर बिल्डरले के गर्नु पर्छ र?
एमके- 2866 संग, तपाईं प्रत्येक महिनाको पाउन्ड पाउन्ड प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले सबै काम गर्ने सबै भन्दा राम्रो कसरत दिनचर्या शामिल छ। जब यसको खुल्ला एक महिना भन्दा बढीका लागि 25mgs प्रति दिन भन्दा अधिक छ, जब पीपीसी दमनबाट जोगिन सिफारिस गरिन्छ।
यो युइचिटो क्यानो द्वारा खोजिएको थियो, र यो सर्वोच्च SARM हरू हो किनभने यो फ्याट हानिमा धेरै उपयोगी छ र मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न को लागी गम्भीर दुष्प्रभाव जस्तै जेवर क्षति वा उच्च रक्तचाप बिना पीडा बिना।
यो टेस्टोलोनको रूपमा पनि जान्छ र बजारमा उपलब्ध सबै भन्दा शक्तिशाली SARM मध्ये एक हो। प्रति दिन 10mg को एक खुराक संग, तपाईं दुबला मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा र शक्ति मा वृद्धि। यसले पनि एक लाइब्रेरी बढाउँछ। यसको प्रयोग पछि PCT चलाउनुहोस्।
यहाँ अर्को SARM हो जुन राम्रो अध्ययन गरिएको छ। यो पहिलो Ligand फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित गरिएको थियो, र यो धेरै मानवीय परीक्षणहरू भएको छ र एक रोचक औषधि साबित भयो।
एक जना स्वस्थ पुरुषमा लिइएको अध्ययन जुन लिनुभयो LGD4033 बीस दिनपछि यो दबाइले दुबला शरीरलाई ठूलो मात्रामा बढाउँछ। केवल पक्ष प्रभाव यो टेस्टोस्टेरोन को छोटो अवधि दमन छ। एक दिन एलजीडीएक्सएनएमएनक्स को एक मिलीग्राम ले एक महत्वपूर्ण मांसपेशियों को विकास प्रदान गर्दछ तर अधिक खुराक, बेहतर परिणाम।
अर्को परीक्षण गरियो, र यो देखा पर्यो कि प्रति दिन 22mg लिने व्यक्तिले कुनै पनि साइड इफेक्ट वा स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित गरेन। Rodents मा, LGD4033 लेजर वा प्रोस्टेट ऊतक नष्ट नगरी मांसपेशी मांस, हड्डी घनत्व बढ्यो। सिग्याग्लुएड प्रभावहरू मात्र पेप्टाइडको रूपमा? होइन, धेरै भन्दा धेरै!
यो तथापि थियो कि LGD4033 शरीर को बोसो को हानि को उत्तेजित नहीं गर्दछ र यदि केवल ले लिया हो, यो केवल एक मांसपेशी र लेनर बनाइनेछ। हार्मोनल दमनले गर्दा प्रभावहरूबाट जोगिन, यो सल्लाह दिइन्छ कि तपाइँ यसको प्रयोग पछि PCT चलाउनुहोस्।
यो SARM हरू संसारमा अर्को ठूलो विजेता हो। यो मानिएको थियो कि चूहमा, यो मांसपेशिहरु मा mitochondrial वृद्धि को उत्तेजना को कारण, सुगन्ध मा कमी, धीरज बढयो र शरीर को बोसो मा मदद मा मदद।
तथापि, चूहों लाई दिइएको थियो SR9009 इंजेक्शनको रूपमा मौखिक रूपमा लिईयो, यसले त्यहि प्रभाव नहुन सक्छ किनकी यसमा सँगै 2% जीवनीता छ र तपाईले यसलाई लिनु भएको प्रणालीबाट हटाइनेछ।
6. MXXUMUM (677-159752-10)
MK677 एक वृद्धि हार्मोन को अधिक छ, र तपाईंको शरीर मा वृद्धि हार्मोन को दबाने को बजाय, यसलाई जोड्छ। संग MK677, तपाईं भूख मा तेजी देखि वृद्धि को आशा गर्न सक्छन्, प्रदर्शन मा बढावा र वसा मा एक महत्वपूर्ण हानि।
यस SARM मा कुनै मानव अध्ययनहरू छैनन्। रोडेंटहरूमा यसको प्रभावमा अनुसन्धान गरेअनुसार यसको प्रयोगले उस्तै जीनहरू सक्रिय पारेको छ जसले वजन बढाउने वा दौडिरहेको बेलामा उत्तेजित हुन्छन्। यद्यपि त्यो कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको कारण जस्तो लागेन, GW-501516 प्रयोग गरी चूहों र एकै समयमा प्रयोग गर्नाले अविश्वसनीय नतिजाहरू देखाइयो।
चूहों मा कि यस ड्रग्स को नियमित रूप देखि चलने को चार हफ्ते संग संयुक्त गरियो मा चलने वाला समय मा 68% बढयो र 70% चलने को दूरी मा बढयो। यसको अतिरिक्त, तिनीहरूको समग्र मांसपेशी दुग्ध भयो।
रोडेन्टहरूमा गरेको अध्ययनमा लिदै GW-501516 एक साथ व्यायाम संग एक 50% मांसपेशियों मा mitochondrial वृद्धि को नेतृत्व को रूप मा, र परिणाम को रूप मा, ऊतकों अधिक ऊर्जा उत्पन्न थकान थकान कम करने में सक्षम थे।
अर्को अवलोकन यो थियो कि चूहों मा GW-501516 मांसपेशियों को संरक्षण गर्दा शरीर वसा को कम गर्दछ।
GW-501516 उत्तम SARM हो यदि तपाईं आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्न र मांसपेशियों को संरक्षण गर्दा वसा जलाउन लक्ष्य छ।
8. एस-23 (1010396-29-8)
यो एक निस्सन्देही SARM जुन मौलिक रूपमा सक्रिय छ, र कि कुशलतापूर्वक रगत मा रगत को मांसपेशी मा वृद्धि को कारण र एरेजन रिसेप्टरहरु लाई बाध्य गर्दछ र वसा मा कमी मा कमी।
स्ट्याक्किङ प्रक्रिया हो जहाँ तपाईं धेरै प्रकारका SARM हरूलाई बल्क, प्रक्रिया र क्यान्सर प्रक्रियाको गति बढाउन एकै समयमा लिनुहुन्छ। SARM धेरै बहुमुखी छ किनकि तपाईं या त उनीहरूको आफ्नै मा वा स्ट्याकको भागको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि SARM ले कठोर परिणाम दिन्छ जब स्ट्याक्ड केही स्ट्याक गर्न सुरक्षित नहुन सक्छ। विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी, तपाइँसँग SARM हरूको प्रकार थाहा पाउनु हुन्छ।
Anabolic स्टेरियोड्स संग
GW501516 सँगै स्ट्याक गर्न Trenbolone सर्वोत्तम anabolic स्टेरॉइड हो किनभने यसले सहनशीलताको समस्यालाई दूर गर्न मद्दत गर्नेछ। यदि तपाईं आफ्नो सहनशीलता बढाउन र वसा शेड गर्ने उद्देश्यमा तपाईं GW लाई कुनै अन्य स्टेरॉइड स्ट्याकसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
LGD लाई सामान्यतः अन्य स्टेरियोड्स संग साइड इफेक्ट जोडने को जोखिम बिना मांसपेशी मा जोडने को लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्कोतर्फ, ताराले, नरम ऊतक स्वस्थ राख्न कोषमा प्रयोग गरिन्छ।
चक्र थेरेपीको अवधि भनेको SARMs चक्र पछि एक्रोजन वा हार्मोनल स्तरको उत्तेजित गर्न को लागी केहि यौगिकहरू वा ड्रिग्नहरू लिनको लागी समावेश छ। एक चक्र चक्र चिकित्सा चलिरहेको धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको शरीरले प्रतिकूल प्रभावहरू भोग्नु हुँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दछ। GW501516 र SR9009 तपाईंको शरीरमा हार्मोन उत्पादन रोक्न, र तिनीहरूले पीसीटीको समयमा फायदेमंद छन्। साथै, धेरै व्यक्ति ओस्टारिनिन को प्रयोग को सिफारिश गर्छन, किनकि सही खुराक संग, यो मांसपेशियों को अपशिष्ट को रोकथाम मा मदद गर्दछ।
A PCT अनिवार्य छैन, तर यो सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ कि तपाईंको शरीर पूर्ण हार्मोनल ब्यालेन्स पाउँदछ। यो साढे6हप्ताको औसत लागी हुनसक्छ यदि सम्भव छ भने यो तपाईंको चक्रको रूपमा नै त्यहि अवधिमा हुनुपर्दछ। साथै, तपाईले यसलाई सही आहार र प्रशिक्षण सँग संयोजन गर्नुपर्छ।
छोटो अवधि भित्र ठूलो मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तपाईंले यो प्राप्त गर्न सही आहार संग एक साथ राम्रो SARM छान्नु पर्छ। जब यो ती मांसपेशिहरु लाई पैक गर्ने समय हो, निम्न SARM हरू चाल गर्नेछन्। LGD-4033 ले तपाईंलाई बल र दुबला मांसपेशीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। RAD-140 मांसपेशियों को लाभ को लागि एक अन्य राम्रो विकल्प हो किनकि यो टेस्टोस्टेरोन को एक नै शक्ति को दावा गर्दछ, तर एकमात्र भिन्नता यो हो कि तपाईंलाई एन्ड्रोजेनिक साइड इफेक्ट देखि पीडित नहीं गर्छन। एमएमएमएमएक्सएक्स वृद्धि हार्मोन हुन सक्छ मांसपेशिहरु।
त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छन् जसमा बासिन्दाहरूले काट्ने प्रक्रिया लिन सक्छन्। उनीहरूले यसलाई बढी विस्तारित अवधि वा छोटो भित्र भित्र गर्न सक्छन्। दुवै तरिकाहरु मा, प्राथमिक लक्ष्य को रूप मा धेरै मांसपेशियों लाई संभव को रूप मा संरक्षित छ। एमके-एक्सएनमक्सले तपाईंको लाभको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ किनभने यो हल्का SARM हुन्छ र एक क्यालोरी घाटा छ जब राम्रो काम गर्दछ।
SR वा GW धेरै प्रभावकारी हुन्छन् किनकी तिनीहरूले वसा हानि उत्तेजित गर्छन्। GW + S4 सबैभन्दा साधारण स्ट्याक हो जब काटिन्छ। तपाईं घाटामा खाने संग संयोजन मा प्रयोग गरे पछि तपाईं कसरी बहाउने बोसो कति बोसो शरीरमा छक्क परेको छ।
सबै भन्दा उत्तम प्राकृतिक पूरक मध्ये एक कि कुनै पनि SARM संग लाभ को बढावा गर्न को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र पुनर्प्राप्ति हो। Hcgenerate पनि टेस्टोस्टेरोन को उत्पादन मा बढन मा धेरै प्रभावी छ र S4 र LGD संग एक साथ स्थगित गर्न सकिन्छ।
यो जहाँ तपाई आफ्नो इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न तीन प्रकार को SARM को संयोजन गर्दछ। यो उत्कृष्ट स्ट्याक र अन्य सबै ढोकाहरु बीच सबैभन्दा लोकप्रिय हो। Ostarine, GW, र S4 संयोजन गरेर, तपाईं सहनशीलता, बोसो हानि, र अविश्वसनीय दुबला मांसपेशी लाभमा सुधार पाउनुहुन्छ। यस स्ट्याकको बारेमा के हो राम्रो छ कि यसले तपाईंलाई आफ्नो शरीर लक्ष्य सम्म पुग्न मद्दत गर्नेछ कि सबै केहि दिन्छ।
ट्रियोल स्ट्याकिङ गर्दा जियो संवेदनशीलता समस्याहरू भएका व्यक्तिहरू जो एक aromatase अवरोध प्रयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि साइइड इफेक्ट दुर्लभ हुन्छन् अर्मिमाइड्स वा एरोसासिन प्रयोग गरी सिफारिस गरिएको छ।
SARM हरू लिनमा निर्णय गर्नु अघि, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू सुरक्षित छन् कि। नोट गर्न पहिलो कुरा यो हो कि SARM पढ्न पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गरिएको छैन किनकि प्रायः अनुसन्धान को सबै भन्दा रोडेंटहरुमा गरिएको छ। हामी यसमा भरोसा गर्न सक्दछ किनकि हाम्रो डीएनए को 98% rodents को समान छ र परिणामहरू सकारात्मक भएको छ, हामी स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छौं कि SARMs प्रयोग गर्ने बाटो हो। Nootropic स्रोत Bromantane: समीक्षा, प्रभाव, डोजज
स्टेरॉयड भन्दा सुरक्षित बनाइएका चीजहरूमध्ये एउटा यो हो कि उनी शरीरमा टेस्टोस्टेरोन उत्पादनलाई रोक्न नसकेको जस्तो स्टेरियोड्स गर्छन्। यसको अर्थ छैन कि तिनीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनन्, तर गम्भीरता धेरै कम छ। SARMs को प्रयोग संग, तपाईं टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को कारणों देखि प्रभावित होने को संभावना नहीं हो, उदाहरण को लागि, टेस्ट को सिकन। तथापि, तीव्रता, SARM हरूद्वारा तपाईले लिनु भएको छ; उच्च खुराक, अधिक दमन तपाईलाई पीडित हुने सम्भव छ। दमनलाई स्ट्याकिङको समयमा उच्च हुने आशा गरिन्छ।
मुद्दा साइड इफेक्टहरूमा, यो ध्यान दिनुहोस् कि SARMs साइड इफेक्टहरू जस्तै अन्य ड्रग्स जस्तै आउँछन्। SARMs साइड इफेक्ट हल्का हुन्छन् र तपाईंको दिनको दिनको गतिविधिमा कम्तीमा असर पार्नेछ। गम्भीर दुष्प्रभावहरूको पीडाबाट बच्न आफैलाई रोक्न निश्चित छ कि तपाईले सिफारिस गरिएको खुट्टाले सही समय फ्रेमको साथ लिनु हुन्छ।
अन्य चीज जो SARM हरू स्टेरियोड भन्दा सुरक्षित बनाउँछ भन्ने कुरा हो कि तपाइँ एक पटक आफ्नो प्रयोग फिर्ता लिनु हुन्छ, तपाईंको शरीर स्टेरॉयड भन्दा तुलनामा छिटो रिकभर गर्न सक्दछ। चूंकि तिनीहरूले तपाईंको हार्मोन उत्पादनलाई रोक्न सकेनन भने, तपाइँको शरीरले उनीहरूको प्रयोग बिना पनि सामान्य काम गर्न सक्छ। यदि तपाइँ एक पीसीसी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले केवल केही गोलहरू लिन आवश्यक छ किनभने तिनीहरू सजिलै एस्ट्रोजन वा डीभीटीमा रूपान्तरित हुन्छन्। केही SARM हरूले तपाइँका प्रयोग गरेर कुनै पनि PCT लाई आवश्यक पर्दैन। SARM हरूको क्यान्सरबाट पीडाको जोखिममा वृद्धि हुन सक्छ। चूहों मा गरियो एक अध्ययन ले दिखाया कि कार्डारिन आंतों मा कैंसर को विकास को कारण हुन सक्छ।
अन्तमा, केहि SARM हरू तिनीहरूले दावा गर्ने हुन सक्दैनन्। यो किनभने किनभने तिनीहरू कम उत्पादन प्रक्रिया वा गुणस्तरको कारणले विषाक्त रसायनहरूसँग मिलाउन सकिन्छ। अपमानजनक निर्माताहरूले मात्रा र लाभ बढाउन ड्रग्समा कमजोर उत्पादनहरू पनि थप गर्न सक्छन्। Mislabelling अर्को उपाधि होईन अक्सर, र यसको लागि धेरै बडिबिल्डरहरू पतन हुन्छन्।
प्रयोगको वैधता र SARMs को बिक्री देशमा निर्भर छ कि तपाईं मा निर्भर गर्दछ। तिनीहरू विश्व एन्टी-डोपिंग एजेन्सी (WADA) द्वारा निषिद्ध गरिन्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमेन्टले तिनीहरूलाई चाँडै परीक्षा दिने योजना बनाइरहेको छ।
आज बजारमा धेरै बिक्रेताहरू SARM हरू चढाउँदैछन्। गुणस्तरले के निर्धारण गर्दछ कि उत्पादन राम्रो छ वा खराब हो। एक राम्रो SARM ले तपाईंलाई उत्तम नतिजा दिनेछ जुन तपाईंलाई प्रोस्टेट ग्राउण्ड एरिजनिक प्रभावहरू जस्तै प्रोस्टेट ग्रंथि समस्याहरू बिना काममा छनौट गरिन्छ। खराब SARM हरूले तपाइँलाई चाहेको नतिजा दिनेछैन। तिनीहरू केवल पैसा बर्बाद हुन्छन्। कारण यो छ कि तिनीहरू कम छन् र कुनै पनि SARM समावेश नहुन सक्छ। अहिलेसम्म पनि तिनीहरू विषाक्त मेथाइलित प्रोहोर्मोनहरू हुन सक्छन् जसले महिलाहरूमा क्लिटरिस र कुपोषणको वृद्धि जस्ता साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ। पुरुषहरूमा, यो जिनेकोमेस्टिया र अन्य एस्ट्र्रोजन समस्याहरू लिभर समस्याहरू हुन सक्छ।
ध्यान दिनुहोस कि SARMs endocrine प्रकार्य को दबाएर काम गर्छन, तपाईंलाई राम्रो तरीका प्राप्त गर्नु पर्छ जो तपाईंलाई स्वास्थ्य प्रभावहरु संग नहीं छोडेगा। उत्तम सप्लायर चयन गरेर, तपाईं अधिक सटीकतासँग परिणामको अपेक्षा परिणामको अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भावित साइड इफेक्टहरू र तपाइँ तिनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। एक राम्रो आपूर्तिकर्ता SARMs जसको खुट्टा सही मापन गरिन्छ र अन्य अज्ञात यौगिहरु संग प्रदूषित छैन बेचन हुनेछ।
हामी सर्वोच्च SARM सप्लायर हो, र म तपाईले कारण दिनुहुनेछ। Phcoker.com मा हामी धेरै प्रकारको SARM हरू अनलाईन गर्छौं, र तिनीहरू सबै शुद्ध, प्रभावकारी र उच्च गुणस्तर हुन्। यस तरिका, तपाईंसँग आश्वासन छ कि हाम्रो उत्पादनहरु लाई तपाईंको अपेक्षाहरु भन्दा बढि प्रदान गर्नेछ। तपाईले के गर्न सक्नु भयो हामी बाट अर्डर छ, र हामी सबै भन्दा कम समय सम्भव हुने ठाउँमा तपाईको स्थानमा उत्पादन गर्नेछौं।
SARM हरू खरिद गर्नुहोस् हामीलाई देखि र आफ्नो शरीर सौष्ठव को लागी शून्य देखि नायक सम्म हेर्नुहोस्!
टेस्टोस्टेरोन: एक्शन, कमजोरी, प्रतिस्थापन, ईबेर्र्ड न्यूजस्लेग्याग, हर्मन एम ब्रेरे, सुसान एनजेस्लेग्याग, पृष्ठ 459-474 द्वारा सम्पादन गरिएको।
एस्ट्रोजन एक्शन - चुनिंदा एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोडलरेटर, र महिला स्वास्थ्य, वी। क्रेग जोर्डन द्वारा, पृष्ठ 418-421।
चुनेनिक एण्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SARMS), विन्किंग गाउ, 2004 को औषध विज्ञान।
2019-02-143मा: 54
म ओस्टिन कसरी खरीद गर्न सक्छु।
र म त्यो मूल्य प्राप्त गर्न चाहन्छु।
2019-05-063मा: 50
होला, buenos días
मलाई एक उत्पाद, एक कोलंबिया envios को उत्पादन गर्न को लागि?
2019-05-07 1 मा: 35
हामी तपाईंलाई ईमेल द्वारा जवाफ दिनेछौं
Bonjour, je je intéresséavos productates! Je suisala recherche d'une augmentation Musculaire Sécuritaire avec une perte de graisse sécuritaire! Quoi vous me pigg ?rer?
2019-10-273मा: 40 बजे
Comme dit Plus haut, je suis intéresséavos productates et je recherche une augmentation Musculaire et perte de graisse la Plus sécuritaire! Quel ਚੱਕਰ et pct?
2019-05-207मा: 22 बजे
यस कम्पैक्ट डिस्क को आधार मा छायांकन र यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु हो।
2019-05-227मा: 33
जेनिियल, एडविन, टेनिमो डीएमएए, डीएनपी, सेलबटामोल, सिफेरेटेर एचएलसी र यसको उपयोग गर्न को लागी। कृपया अनुमोदित गर्न को लागी इलेक्ट्रनिक्स को उपयोग गर्न को लागी।
2019-06-043मा: 55 बजे
यदि तपाईं यस कुरा को बारे मा सोच सकते हो, म तपाईंलाई बताछन कि तपाईं केहि र अधिक पढाई को लागि सही हो।
2019-06-06 1 मा: 25
यदि तपाईं ओस्टारिन को पोल्याण्ड को सबै भन्दा बडा छ, यस तरिका को सबै भन्दा राम्रो काम गर्दछ।
कृपया यसको बदलन को लागी संशोधित गर्नुहोस
2019-06-045मा: 43 बजे
मलाई एक प्रकार को बिरुवाहरु को रूप मा छ
होला Ricardo, यसैले YK11 एक एस्टाले को लागि, यस कम्प्यूटर को एक कम्प्यूटर संग कम्प्यूटर को उपयोग गर्दछ। न्यू यॉर्क ले भन्यो कि यो YK11 को उपयोग गर्दछ को उपयोग को लागि इलेक्ट्रनिक्स को उपयोग गर्दछ।
2019-06-196मा: 27 बजे
Los Sarms को उपयोग को शर्तें? específicamente GW y S4
2019-06-21 11 मा: 35
हो, यो उपयोग को लागि उपयोग गरे, कुनै समस्या छैन। Entonces, GW y S4 को द्वारा bien para ti। कुनै प्रकोपैशन छैन।
2019-06-20 8 मा: 26 बजे
Buenas tardes, México Ciudico, Presentations and Preferences in Ligandrol को बारे मा अधिक जानकारी, र अधिक पढें।
2019-06-216मा: 04
यस, एक मेक्सिको Ligandrol को लागि। यो एक स्वचालित रूप देखि इलेक्ट्रनिक्स को उपयोग गर्दछ र एक कम्पोजबार।
2019-06-20 10 मा: 09 बजे
Waarom क्यान्सर ISO-en GMP-certificaten कुनै वेबसाइट मा छ?
2019-06-21 12 मा: 28 बजे
हामीले तपाईंलाई ईमेल पठाउनुभएको छ र कृपया जाँच गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
2019-06-263मा: 23
होल कोररा सम्झौता SARM
Andarines। यो एक españa को लागि?
2019-06-283मा: 04
होल, मनुअल, यस, एस्पेपाइड को लागि पोडेमोस। यो एसएसएआरएम को उत्पादन हो। Gracias
2019-11-21 10 मा: 01 बजे
नमस्ते, म SARMS खरीद गर्न इच्छुक छु, मँ भन्छु म धेरै दुबला र फिट छु। तर मेरो सपना भनेको मेरो खुट्टा र गधामा 5kgs राख्नु हो। मलाई लाग्छ कि म एक समयको सानो प्यारोडको लागि SARMS प्रयोग गर्न सक्दछु। तर यो सायद यहाँ आइसल्याण्डमा अवैध छ र पोस्ट प्रणालीमा मैले सोचेको छैन। म के गर्न सक्छु?
2019-11-296मा: 23
हामी प्याकेज डेलिभर ग्यारेन्टी गर्नेछौं, र हामी आवश्यक छ भने प्रच्छेद प्याकेज प्रयोग गर्छौं
यदि तपाईंलाई यसको खरीद गर्न रूचि छ भने, कृपया हामीलाई अर्डर मात्रा पठाउनुहोस्, धन्यवाद।
2019-11-289मा: 39 बजे
के यो F Frar Frauen को पेट अण्ड निक्ल्ट स्कूल हो?
2019-11-294मा: 00
Es wird gesagt, das MK2866 fur Frauen verwendet werden kan, danke।
सत्यलाई तपाईंले एमके- 2866 (ओस्टाराइन) प्रयोग गर्नु अघि जान्न आवश्यक छ